‘सहकारीलाई खुकुलो नछोडौं’
दमौली । सहकारीलाई नियमन नगरिंदा समस्या देखिन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले यसमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
करोडौं ठगेको दमौली बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणले निकास नपाएकै बेला आम सदस्यको लगानी सुरक्षाका लागि सहकारीको नियमनमा कडाइ हुनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सोमबार दमौलीमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले स्थानीय तहको जिम्मामा गएकाले सहकारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको विशेष जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले सहकारी बैंक सहकारी संघ संस्थाका लागि आवश्यक रहेकाले यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न सुझाव दिए । यसअघि दमौलीमा बैंकको अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि हाल सुधार आएकोप्रति उनले खुशी प्रकट गरे । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बैंकले न्युन आय भएका क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । नगरपालिकाले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने पनि उनले बताए ।
बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का केन्द्रीय सदस्य पि.एल. श्रेष्ठ, दुग्ध उत्पादक केन्द्रीय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरबहादुर कुँवर, जिल्ला सहकारी संघ तनहुँका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भट्टराई, समाजसेवी समुन्द्र गोदार, जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष रामजी लौडारी, जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघका महासचिव प्रदिप अधिकारी, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद पौडेल, तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठ लगायतले राज्यले गरिवी निवारणका लागि परिचालन गर्ने बजेट सहकारी बैंकमार्फत लैजान सकेमा लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित हुने र त्यसको प्रतिफल आउने
कार्यक्रममा बैंकका आगामी कार्यक्रम र अभियानसंगको समन्वयका बारेमा बैंकका सञ्चालक रामबहादुर जिसीले जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा बैंकको संक्षिप्त चिनारीका बारेमा व्यवसाय प्रवद्र्धन विभागका प्रमुख मधु रायमाझीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका पोखरा शाखाका प्रमुख केदार उप्रेती र दमौली शाखाका प्रमुख सुमित्रा थापाले पनि बोलेका थिए । सोही अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको दमौली शाखामा आ.व. २०७३÷०७४ मा उत्कृृष्ट कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु शुभलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई सम्मान गरिएको थियो ।